Owesifazane angaba kanjani Yenza Ngini ku Ebay? Yenza sengathi Man - Izindaba Rule
Owesifazane angaba kanjani Yenza Ngini ku Ebay? Yenza sengathi Man
Men uthole 20% ezingaphezu ngokwesilinganiso kunabesifazane ngokuthengisa nsé imikhiqizo emisha on eBay, esikhanyisela ukucwasana equlekile ezithinta ukuziphatha ukuthenga
Lesi sihloko osesikhundleni “Owesifazane angaba kanjani okwengeziwe mayelana Ebay? Yenza sengathi umuntu” lalotshwa Ian Isampula Science umhleli, The Guardian ngoLwesihlanu 19th February 2016 19.04 UTC
Abesifazane abadayisa izimpahla online ngokusobala kungaba ukulanda amanani aphakeme uma bethanda ukwenza tweak elula ukuba pitch zabo: zizenze bangamadoda.
Tholile liphuma isifundo lapho kutholakala ukuthi kukhona amadoda ngokwesilinganiso zuza 20% ngaphezu kwabesifazane uma idayiswa nsé imikhiqizo emisha on eBay.
I kungalingani ibonakala ivela ukuthambekela for bonke abathengi – kokubili amadoda nabesifazane – ukunikela kancane izinto bekezela endalini at esigcawini online lapho umdayisi ungowesifazane.
"Sasilindele ukuba uthole igebe, kodwa thina bamangala ubukhulu, ikakhulukazi ngoba sakuthinta kwaba kwimikhiqizo emisha lapho abesifazane futhi amadoda athengisa ncamashi into efanayo,"Kusho UTamari Kricheli-Katz, isazi sezokuhlalisana kwabantu e-Tel Aviv University.
Related: Singababona kanjani o-silungise ukucwasana ngokohlanga equlekile? | kuNathalia Gjersoe
Imiphumela kucatshangwa ukuthi liyasikhanyisela ngale ukucwasana unganakile ezithinta ukuthenga kwabantu ekuziphatheni. Enye yezimbangela, eziphakanyiswe abalobi, wukuthi abantu ngokungazi ukwabela value xaxa ukuze imikhiqizo owned by amadoda kunabesifazane, okuholela abathengi ezingaba ukuvalelisa more.
Uma isifundo lusekelwa ucwaninge ngokwengeziwe, bekuyoba ngomunye wabokuqala ukukhombisa ngedatha real umkhiqizo kanjani nokungalingani kanye nokungabi ukucwaswa wafaka nabesifazane kusimo njalo esigcawini online.
Kricheli-Katz futhi Economist tali Regev ihlaziye US yokuthengisa 420 imikhiqizo ethandwa kakhulu kusukela uhla eligcwele eBay izigaba phakathi 2009 futhi 2012. Bathola ukuthi abesifazane yakhiwa cishe ingxenye yesine nabathengisi e kudathasethi, nokuthi naphezu kokuba nakho kancane ethengisa, ababewajabulela nedumela kangcono njengoba nabathengisi.
I kungalingani kwamanani kukhokhelwe izimpahla kwabonakala imikhiqizo esetshenziswa kanye entsha, kodwa igebe lalilincane kakhulu. ngokwesilinganiso, abathengi ikhokhwe abesifazane 97% yentengo bakhokha amadoda ngoba izinto ezifanayo kagwayi. Igebe kungenzeka ezincane ngoba nokuchema kwabesifazane cishe offset abathengi ukuba ithemba ngaphezulu izincazelo yabesifazane kagwayi izinto, abacwaningi ukubhala ephephabhukwini Isayensi Intuthuko.
Nakuba eBay nabathengisi musa ukumemezela ubulili sabo kusayithi, abacwaningi wagijima ukuhlola ahlukene eyabonisa ukuthi amagama wabasebenzisi nabathengisi ', futhi izinto badayisa, kwaba umhlahlandlela olunembile. "Uma Ngithathe nokuthengisa iPhone, kodwa izicathulo zami futhi isikhwama, kuyoba lula impela ukubona kimi njengomuntu wesifazane,"Kusho Kricheli-Katz. "Futhi izinto ezingaphezu ngithengisa, abantu ngokunembe kakhudlwana kungaba ngetigaba kimi. "
Ukuze avivinye ukubazindlekela zabo ukuthi abathengi bakhokhelwa kancane kwabanye abantu besifazane kunabesilisa ngenxa nje ubulili babo, duo uqalise ukuhlolwa online. Bacela abantu ukuba amemezele kungakanani uyokhokha for $100 voucher Amazon. Lapho voucher kwaba olunikezwa "Mandla", amabhidi lalilikhulu ukwedlula lapho olunikezwa "Alison".
Imiphumela ibonisa ukuthi, ngokwesilinganiso, Abesifazane zazisesimweni esibi kunalokho emakethe online. Kodwa a lokumba idatha yembula ezinye upsides for nabathengisi female. In izigaba ezithile, abesifazane ngokuvamile wathengisa izinto ezifanayo for more than amadoda enza. A model oluthile Barbie nga kuthengisiwe ngokukhulu 16% xaxa ukuze abesifazane nabathengisi, ngenkathi ukudla pet, ngaphandle kwesizathu, kuthengisiwe ngokukhulu 20% Okuningi. Ngokolunye uhlangothi, la madoda enza ephezulu 270% more uma ngokuthengisa Nintendo Wii, 30% more on iphrinta ezishisayo, futhi 20% more on igalofu amabhola. Ukusonga ummese nga kuthengisiwe ngokukhulu 61% kancane uma ithengwa owesifazane kunendoda. "Awufuni ukuba kube abathengisayo owesifazane,"Kusho Regev.
Konke okuyinto ushiya umbuzo wokuthi owesifazane ukuba enze. Elinye isu abacwaningi baye bezwa nakwabesifazane ukuba afihle lokho ayikho igama lomsebenzisi besilisa on eBay futhi adayise into eyodwa ngesikhathi ukusiza gubadlela ubulili babo. Kodwa akekho kubo Kricheli-Katz noma Regev abalandeli of ndlela. "Asifuni ukuba kube bephila ezweni lapho abantu babethela ubulili babo. Kungase kuzwakale kuyisikhathi isu elihle, kodwa kufanele ekunciphiseni lesi igebe nangezinye izindlela,"Kusho Kricheli-Katz.
"Isu Kungcono ngoba abathengi ukubheka kwabesifazane nabathengisi futhi uthenge kubo,"Kusho Regev. "Bathola amanani angcono, kodwa ngesikhathi esifanayo, ukuqhudelana more on imikhiqizo yabesifazane kuzosiza igebe. "Better namanje, akhokhe abesifazane intengo efanayo njengoba nabathengisi owesilisa.
"Lokho esikubonayo nginethemba wukuthi ngokwenza abantu abaningi ukuwazi ukucwasana equlekile, mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi igebe ngeke unciphise,"Kusho Kricheli-Katz. Okwenza izinto zibe zimbi nakakhulu, Abesifazane ngokuvamile zikhokhelwe imali eyengeziwe kunamadoda imikhiqizo ababewathenga on eBay.
In the iphephabhuku abalobi imibuzo mayelana nezinye ezimakethe lapho sex nabathengisi akulona neze kokungabaza: "Ngenxa inqubomgomo, eBay akusho kungabekwa ngembaba usho ubulili abasebenzisi bayo. Noma kunjalo, Amadoda nabesifazane kalula ubulili-bahlukaniswe nezinye abasebenzisi. Sisola ukuthi divergences enkulu nakakhulu abakhona kwezinye izimakethe umkhiqizo lapho ubulili uhlale ezaziwayo,"Babhala.
21883	4 Isigaba, eBay, Ukulingana, Ian Sample, kwesigaba Main, Izindaba, Psychology, Isayensi, The Guardian, UK news
← 14 Times Google Empeleni Wasindisa Ukuphila Omunye [Ranker] The Perfect Isikhathi Sonyaka Yokwenza 10 lokuthengiwe Big [MENTALFLOSS] →